वीपी प्रतिषठानका दुइ चिकित्सक पनि काेराेना संक्रमित - ConfuseNepal
श्रावण २५, २०७७ – वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका दुई चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रतिष्ठानको इएनटी र बायोकेमेष्ट्रिी विभागका दुई पुरूष चिकित्सकको पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
दुवैको अवस्था सामान्य रहेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताएका छन । शंका लागेर नै दुवै डाक्टरलाई आइसोलेट गरी पिसिआर जाँच गराएकोमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको डा. सापकोटाले बताए । संक्रमित चिकित्सकहरू संग सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक ट्रेसिङको काम भइरहेको उनले बताए ।
← बार्सिलोना र बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा भिड्दै, चेल्सी र नेपोली प्रिक्वार्टरफाइनलबाटै पाखा लागे
सक्खर चिनी भन्दा गुलियो गीत (भिडियाे सहित) →